ယက်မဒြပ်ပေါင်းစက်၏ အသုံးချမှုနှင့် အားသာချက်များ
ယက်မဟုတ်သော lamination စက်ကို အသုံးပြုခြင်း- အထည်အလွှာနှစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော အလွှာများနှင့် ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများကို တစ်ခုလုံးဖွဲ့စည်းရန် ချည်နှောင်ထားသည်။ယခု ၎င်းတို့သည် ပေါင်းစပ်ပြားများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ဤပစ္စည်းများတွင် အမျိုးမျိုးသော ရေမြှုပ်များ၊ အထည်များ၊ EVA၊ သားရေတု၊ သိုးမွှေးတု၊ ယက်မဟုတ်သောအထည်များ၊ ဝင်ရိုးစွန်းသိုးမွှေးများ၊ cashmere၊ h...
ယက်မဟုတ်သော ဒြပ်ပေါင်းစက်ကို အသုံးပြုခြင်း။
一、 ယက်မဟုတ်သော lamination စက်အသုံးပြုခြင်း ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် ဒြပ်ပေါင်းစက်သည် အိမ်သုံးအထည်အလိပ်၊ အဝတ်အထည်၊ ပရိဘောဂ၊ မော်တော်ကားအတွင်းပိုင်းနှင့် အခြားဆက်စပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသော အထည်အလိပ်၊ ယက်မဟုတ်သောအထည်၊ သားရေ၊ ရုပ်ရှင်၊ စက္ကူ၊ စပွန်ဆာ...
Flat laminating machine Roller laminating machine Hot press၊ high frequency laminating machine သည် ပူပြင်းသော အရည်ပျော်ကော်ဇာတ်ကားများ၏ ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးချမှုကြောင့်၊ မတူညီသော အသုံးပြုမှုအခြေအနေများအတွက် စျေးကွက်တွင် လက်ရှိတွင် နောက်ထပ်စက်များ ရှိပါသည်။လက်ရှိတွင် ပင်မရေစီးကြောင်း ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်များတွင် ပြားချပ်...
အပူအရည်ပျော်သော ကော်ဖလင်နှင့် ယက်မဟုတ်သော အထည်များ ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ယက်မဟုတ်သောအထည်နှင့် ပူသောအရည်ပျော်ကော်ဖလင်ကို ရောစပ်နည်း "ပူသောအရည်ပျော်ကော်ဖလင်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။တစ်ယောက်ယောက်က မေးနေတာကြောင့် ဒီနေ့တော့ အသုံးပြုမှုနဲ့ လူကြိုက်များမှုအကြောင်း ရိုးရှင်းတဲ့ နိဒါန်းတစ်ခု ပြောပြပါမယ်။ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ် နှင့် ပေါင်းစည်းမှုတွင် ကွဲပြားမှုအချို့ ရှိနေသောကြောင့် ...
TPU အပူအရည်ပျော်ကော်ဖလင် laminating ထုတ်လုပ်သူ၏ဘက်စုံသုံး lamination စက်
ပေါင်းစပ်ခြင်းကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဟု ခေါ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ တူညီသောပစ္စည်း သို့မဟုတ် မတူညီသော ပစ္စည်းနှစ်ခုထက်ပိုသော အရာများ တစ်ခုလုံးအသစ်ဖြစ်လာစေရန်အတွက် အချို့သောလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် ခေတ်မီစက်မှုထုတ်ကုန်များ၏ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အရေးကြီးသော ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
PUR ကော်ပူအရည်ပျော်စက် (PUR ပူကော်စက်ဟု ခေါ်ဆိုသည်) ပစ္စည်းကိရိယာ- အရည်ပျော်နိုင်သော PUR ပူပူနွေးနွေးကော်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အရည်ကျိုထားသောကော်ကို ဖိအားပေးသည့်ကိရိယာမှတဆင့် ကြမ်းပြင်သို့ ကော်အပေါ်ယံပိုင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ .အပေါ်ယံပိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။လျှပ်စစ်စက်ကိရိယာ...
Mesh belt ဒြပ်ပေါင်းစက်သည် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
Mesh belt laminating machine သည် ပစ္စည်း နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုကို တညီတညွတ်တည်း ကော်ပတ်ထားသော စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ကုန်ကြမ်းများကို လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များ ပြုလုပ်ပါ။ဖလင်နှင့် အလူမီနီယမ်သတ္တုပြား၊ ဖလင်၊ စက္ကူ၊ ယက်မဟုတ်သောထည် စသည်တို့ကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ဖလင်၊ ရေမြှုပ်၊ အထည်စသည်ဖြင့် တွဲသုံးနိုင်သည်။
အမျိုးမျိုးသော coating နည်းလမ်းများကို မိတ်ဆက်ခြင်း 【ကာတွန်းသရုပ်ပြခြင်း】
ဤဆောင်းပါးတွင် ဂရာဗီးအဖုံးအုပ်ခြင်း၊ ပြောင်းပြန်အလိပ်အုပ်ခြင်း၊ ဓားလိပ်အပေါ်ယံပိုင်း၊ မီတာချိန်ဘားအပေါ်ယံ၊ slot die coating၊ dipping၊ curtain coating နှင့် air knife coating အပါအဝင် coating compound machine ၏ မတူညီသော coating နည်းလမ်း ရှစ်ခုကို အဓိက မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ကြမ်းပြင်။မှတ်ချက်- နည်းပညာဆိုင်ရာ ရောင်ခြယ် နိုင်ငံတကာ...
ရော်ဘာကြိတ်စက်များကို နေ့စဉ် သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
anilox roller ၏ အချိန်နှင့်တပြေးညီ မှန်ကန်သောနေ့စဥ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ထိရောက်စွာ သက်တမ်းတိုးစေပြီး အသုံးပြုမှုကို တိုးမြှင့်ကာ အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ပါသည်။1. လည်ပတ်မှုအသစ်သည် နောက်ဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ပါက၊ အရေးကြီးသောအမှာစာများကို သက်သေပြရန်အတွက် Rollers အသစ်များကို အသုံးမပြုပါနှင့်။anilox roll သည် deb ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော်လည်း...
PUR ပူပြင်းသောအရည်ပျော်ကော်ပြားခင်းခြင်းစက်၏ Gluing နှင့်သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်း
PUR အပူ-အရည်ပျော်သော ကပ်ခွာအပေါ်ယံခင်းခြင်းစက်သည် အန္တရာယ်ရှိသောပါဝင်ပစ္စည်းများမပါဝင်သည့် 100% အစိုင်အခဲပူ-အရည်ပျော်ကော်ကို အသုံးပြုထားသည်။အရည်အခြေအနေသို့အပူပေးပြီးနောက်၊ ၎င်းကို တွယ်တာမှုအောင်မြင်ရန် အလုပ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ညီညီညာညာနှင့် ပုံမှန် coated သည်။.မတူကွဲပြားမှုတွေအရ...
PUR laminating စက်၏ coating နှင့် laminating လက္ခဏာများအကြောင်းမိတ်ဆက်
1. လိမ်းထားသော ကော်ပမာဏကို တိုးပေးပါ။ကော်ပမာဏ အလွန်နည်းပါက သို့မဟုတ် အလွှာ၏ မျက်နှာပြင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ကော်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားခြင်း မရှိပါက၊ အလွှာနှစ်ခုကို ပေါင်းစည်းရန် ခက်ခဲလိမ့်မည်။ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောဆဲလ်ပါရှိသော anilox roller ကိုရွေးချယ်နိုင်သည် ...
ဧရိယာ A၊ ၅ ထပ်၊ Kaku Shangzhong Gaocheng၊ အမှတ် 77 အနောက် Tailong Nitou လမ်း၊ Shatian မြို့၊ Dongguan မြို့
© မူပိုင်ခွင့် - 2010-2021- All Rights Reserved.Hot Products များ - ဆိုက်မြေပုံ
Hydraulic Press Die Cutting Machine ၊, Pp Lamination စက်, ဟိုက်ဒရောလစ်နှိပ်စနစ်, Bopp Lamination စက်, စက္ကူ Lamination စက်, Box Lamination စက်,